​भैरव अर्यालको निवन्ध : अमरावती कान्तिपुरी नगरी
Saturday, 12 Jan, 2019 1:47 PM
२८ पुस, काठमाडौं । ‘उहाँ छउन्जेल डिट्ठाविचारीसित बिन्ती बिसाउँदैमा बित्यो, कहिले उडुस–उपियाँको नाचगान हेरेर झ्यालखाना रुङ्दैमा बित्यो, कविता लेख्ने कत्रो धोको हुँदाहुँदै पनि मन फुकाएर मनग्ये ठेली लेख्नै पाइएन’ स्वर्ग पुगेकै दिन आदिकवि भानुभक्तले नन्दनवनस्थित उर्वशीपार्कमा टुसुक्क बसेर अपशोचको एक सुस्केरा हाले । उर्वशीपार्कको रमिता बयान गरिनसक्नु थियो । त्यसमाथि बिर्खे टोपी र छड्के पछ्यौराको कसिएका निकै पुड्का भानुभक्तलाई त्यहाँ देखेर झुम्मिन आउने रम्भा र तिलोत्तमा आदि चपला अबलाहरूका चनमते आँखा छनमते कम्मर कसले हेरिदियोस् । त्यसैले अपशोचको सुस्केरा हाल्नेबित्तिकै आदिकविले अर्को खुसीको सुसेली पनि छाडिहालेः
स्वर्गङ्गाको सिरसिर बताससित भानुभक्तको स्वरसतार पनि जब बहन थालेको थियो त्यहाँ उपस्थित सारा इक्षअप्सराहरू सपेराको बाँसुरीकमा झुमेका नागनागिनीझैँ अथवा भनूँ कृष्णजीको मुरलीमा लट्ठिएका गोपगोपिनीझैँ हेरेको हेर्यै भैहाले । आशुकवि भानुभक्तलाई न मूड चाहियो न कलम नै, त्यसदिनदेखि कवित रच्न थालेका रच्तारच्तै कति शरद् बिते, कति वसन्त बिते, उनलाई पत्तै भएन । धेरै वर्षपछि एक्कासि उनको मुखबाट निस्क्यो– ‘अमरावति कान्तिपुरी नगरी’
अनि पो भानुभक्तजी आफ्नो काव्य–निद्राबाट झल्याँस्स ब्यूँझे । टक्क अडिएर पल्याकपुलुक हेर्न थाले । केही सम्झेजस्तो, केही खोजेजस्तो उनको मुद्रा देख्ता सबै निकैबेर चकित तर कविजीले आफैँ उठेर पछिल्तिर फर्की समूहहरूलाई सोधे– ‘होइन, यहाँ कान्तिपुरबाट आउने कोही छ ?’
कहिल्यै नसकिने अलका मार्क चुरोटको धूवाँ बुङ्बुङी उडाउँदै पल्लो छेउमा पलेँटी मारिरहेको मखिबुट्टे टोपीवाल भलादमीले जुरुक्क उठेर भने– ‘म पनि कान्तिपुरबाटै आएको तपाईंको चोलो हुँ गुरुजी ! मेरो नाम लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा हो ।’ चुरोटको लामो सर्को तान्दै देवकोटाजीले भने– ‘तपाईंको पालाकोभन्दा त कताकता सुन्दर छ । मैले आफ्नो मुनामदनमा पनि मन फुकाएर प्रशंसा गरेको छु, साँच्चै रमणीय छ, त्यो गुरुजीको अलकापुरी म आउँदै त त्यस्तो थियो भने मैले छाडेको पनि भइसक्यो पाँच–छ वर्ष ।’
रामायणकार जानुभक्त भानुका भक्त मात्र थिएनन, रामभक्त पनि हुने भइहाले । रामभक्तको प्रताप कति अलौकिक हुन्छ भन्ने कुरा हनुमानको चरित्रबाट प्रस्ट छँदै छ । जुन भक्तिको प्रतापले हनुमानले पुच्छरमा आगो लिएर त्यत्रो लङ्का जलाइदिए, त्यत्रो द्रोणाचल पर्वत हत्केलामा राखेर ल्याइदिए, त्यसै भक्तका प्रतापले हाम्रा भानुभक्त पनि कसरी–कसरी एक दिन टुप्लुक्क बालाज्यूमा उत्रन आइपुगेछन् । सय वर्षभन्दा अगि मरेको मान्छे यहाँ आउला भन्ने कसलाई विश्वास लाग्ला र ! कुरा यति हो– एक दिन आफ्नो प्यारो अलकापुरी हेर्न हाम्रा आदिकविजी आइपुगेछन् काडमाण्डौंमा । त बालाजूको बाइसधारा उद्यान देख्नेबित्तिकै उनी एकछिन त जिल्लाराम परे, झण्डै यो त अमरावतीको अप्सरा– उद्यानजस्तै पल्टिए, पल्टिनु के थियो कविताको मूल फटिहाल्यो–
तर नजिकै औद्योगिक क्षेत्र थियो । त्यहाँका नयाँ–नयाँ भवनबाट निस्केका घार्र र घर्र आवाज एवं धूवाँको मुस्लोले गर्दा उनको कविता पूरा हुन पाएन । उनलाई के लाग्यो भने अप्सरा आएर यहाँ यस्तो रमणिय उद्यान बनाइसकेछन, विश्वकर्मा आएर त्यहाँ औद्योगिक क्षेत्र खोलिसकेछन, लम्फू त मै मात्र रहेछु, अहिलेसम्म आफूलाई आत्तोपत्तो थिएन तर विणा, हतौडा एउटै खटियामा सजाएजस्तो उद्यान र उद्यमस्थल एउटा ठाउँमा गाँसेको चाहिँ उनलाई अलि चित्त बुझेन । तैपनि कान्तिुर अब केवल प्राकृतिक क्रान्तिले मात्र होइन औद्योगिक क्रान्तिले पनि अर्कै ढङ्गबाट बदलिन लागेजस्तो भानुभक्तले अनुभव गरे । त्यसैले उनको कविता पनि यसरी फुट्यो–
‘कहीं घर्घर ज्यावल(मेशिनको
यत्तिकैमा केही युवायुवतीहरू जोडीजोडी मिली उद्यानभित्र पसेकाले कविता रच्तारच्दै भानुभक्तजीका आँखाचाहिँ ट्याक्क युवतीको टाइट हिपतिर लाग्न पुगेछन् । ‘आमै, यी केटीहरू नागकन्या त होइनन् । लगाइ र हिँडाइ त ठ्याम्मै उस्तै छ बा, हेरुँ राम्ररी !’ भानुभक्त सम्पूर्ण ध्यान उनीहरूकै वक्रा अङ्गिमा र भावभङ्गिमातिर पुगेर अड्यो । युवकहरू पनि माथिमाथि फुकिफुकाउ तलतल कसिकसाउ देख्दा भानुभक्तजी झन् दङ्ग परे । हुनत त्यहाँ अरू पनि बालक, बुढा, गृहणी सब थिए, तर ठिटाठिटीको नृत्यलीलामा ती त केवल आफैँजस्ता दर्शक मात्र । आखिर उनलाई के लाग्यो भने काठमाडौंको ठाउँ मात्रै साँघुरिँदै गएको होइन, मान्छेको लवाइ पनि साँघुरिँदासाँघुरिँदै काँचुली नै बनिसकेछ ? रसिक भानुभक्तलाई यो परिवर्तन झन् रोचक लाग्यो र कविता पनि फुरिहाल्यो–
साँझ परिसकेकाले त्यहाँ धेरै बेर बस्ता आफ्नो कविता अश्लील दोष पर्ला भन्ने ठानी उनी जुरुक्क उठेर उद्यानबाहिर निस्के । साझा यातायातको हरियो बस पनि ठ्याक्क त्यहीँ रोकिइरहेको रहेछ । सबै पसेको देखी उनी पनि पसे त्यसैमा । पस्न त पसे, तर बस्न भने घुँइचोले दिएन । ‘कान्तिपुरीमा मान्छे निकै बढेछन् ए ! यतिका मान्छे खान्छन् पो के ?’ उनको दिमागमा अर्को प्रश्न रिङन आयो । तर त्यत्रो हूलमूलमा प्रश्न के रिङन पाउँथ्यो, उनी आफैँलाई रन्न रिँगारिएर हुत्याउँदै एउटी युवतीको छेउमा पुर्याइदियो । युवतीको काखमा एउटा रहरलाग्दो कुकुर पनि थियो ।
नारीसित नारिएर बस्न भानुभक्तको नैतिकताले मानेको त होइन, तर घुँइचोचोमा एउटा सानो छेउ पाएकाले आपदधर्म सम्झी उनी टुसुक्क बसिहाले तर बस्नेबित्तिकै घच्चा ख्वाउँदै युवतीले सातो खाइन्–‘महिला देख्दा देख्दै टाँसिन आउने नकच्चरो लुठो कहाँको ?’ भानुभक्त जिल्ल परे । भरखरै मात्र पार्कमा छिल्लिएर हिँडेको आफ्नै आँखाले देख्ने भानुभक्तले अहिले नजिक बस्दा मर्दले छुनै नहुनेजस्तो गरी छाँट पारेको सहन सकेनन् र काखको कुकुरलाई औँल्याउँदै उनले सोधिहाले– ‘होइन, मैयाँको कुकुर पनि महिला नै हो कि ?’
‘तलाई के वास्ता !’ भनी युवतीज्यू फेरि सातो खाँदै थिइन, त्यसैबेला बसले चाहिँ चोल्टिङ खाइदियो । बसभरिका मान्छे माझीको पुरङ्गामा माछाझैं ऊ उसको डँडालोमा चढ्न पुग्यो त ऊ उसको भुँडीमा भकुन्डिन पुग्यो । बिचरा भानुभक्तको चाहिँ बिर्खै टोपी नै कता पुग्यो कता । ‘धन्य परमात्मा ! बाटोभन्दा ठूलो बस, बसभन्दा ठूलो थुप्रो बुसभित्र बस्नेहरूको । त्यही पनि बस भन्नु मात्रै, बस्न पाइने होइन, बरु उठीउठी यात्रा गर्नुपर्ने यस्तो वाहनको नाम ‘उठ’ नै राखेको भए ठिक हुन्थ्यो कि’– भानुभक्तले एउटा बूढोपाको यात्रुसित प्रस्ताव राखे ।
उनले भने–‘यस्तै सिन्कीकोचाइ रत्नको कुदाइले त कति नेपाली बाइरोडको बाटो स्वर्ग गइसके थाहा पाउनुभएन ?’ तर स्वर्ग गएका भए त भानुभक्तले बाटामा भेट्नुपर्ने । सायद ट्रकसित गुजुल्टिएकाले बैकुण्ठकै ट्रंककाल आयो कि उनीहरूलाई ? तर जेसुकै आओस, आदिकविज्यूलाई चाहिँ कविता आइहाल्यो–
सिट बीस भए भीड सौतकको
कविताको तेस्रो चरण मिल्दा नमिल्दै बस आफ्ना स्टपमा आएर बसिहाल्यो । ओर्लिएर हेर्छन् त भानुभक्त छक्कै । टुँडिखेल वरिपरि बार, बीचबीचमा लामपुछ्े बत्ती, सडकभरि बस, मोटर सिलिङ–मिलिङ, रङ्गीचङ्गी मान्छे त कति हुन् कति ! अमरावती पुगेका दिन जसरी अलमलिएका थिए, अहिले पनि झन्डैझन्डै उस्तै भो भानुभक्तलाई । एकछिन यताउति निहाले–फराकिलो सडक, बसको ताँती, टुँडीखेलको झिलमिलाउँदो रूप देखेर मक्ख पर्दै कविता रच्ने सुरमा थिए ।
तर बीचैमा ४–५ ओटा भुराभुरीहरू पिल्पिलाउँदो मुख लगाउँदै भटमास किन्ने पैसा माग्न थालेकाले उनको मुड नै अफ भयो । यहीँ यतिका सेठसेठानीहरू छन, यहीँ भटमास खाने पैसा माग्छन–साँच्ची कान्तिपुर धनी भएको हो कि गरिब हुँदै गएको हो, उनलाई छुट्याउन मुस्किल पर्यो । तैपनि कान्तिपुरे मुखका कति कान्ति बढेछ भनी एकएक गरी चियाउन थाले । छन ता सबैका मुख सिँगारिएका थिए तर कसैका गोरिँदागोरिँदा हात टल्कने सेता, कसैका नर्मिदानर्मिदा बासी जाइको फूलजस्ता नरम । आखिर उनले के ठम्याए भने कान्तिपुरको कान्ति त निकै बढेछ, तर कान्तिपुरको शान्ति भने मामाघर जान थालेछ है । यो गम्दा उनलाई यति खल्लो लागेर आयो एक सूचीले समेत च्यापेर ल्यायो । त्यो रङरमिताको भीडमा गर्ने कहाँ । यताउति हेरे कतै पत्तो लागेन ।
आखिर उनी पसे नयाँ सडकतिर । नयाँ सडक मात्र नयाँ थिएन तडकभडक पनि नयाँ थियो । कान्तिपुरको कान्तिविहीन मुहार पनि नयाँ सडकमा त फुर्तिलो, उनलाई अलि सन्तोषै लाग्यो तर त्यहाँ कान्तिपुरे मात्रै थिएनन, रङरङका चेहरा र कद थिए । त्यहाँ राता, सेता, काला, नेप्टा, चेप्टा, फ्रकवाल, दोचावाल, कोटवाल, भाटेवाल, शान्तिदूत, धर्मदूत कोको हुन् कोको ? भानुभक्तको प्रतिभा उम्लेर आयो–
नवजोर यहीँ दिलचोर यहीँ
सबै थरीका बीच भानुभक्त पनि एक बेग्लै थरी व्यक्तित्व थिए–नयाँ सडकमा । सबै दूतका बीच उनी आफू काव्यदूत थिए स्वर्गका । यसैले वास्ता गरिरहनुभन्दा २÷४ जना कविलाई नै भेटेर बात मार्न आदिकविलाई मन लाग्यो । तर भेट्ने कहाँ चएर, कसलाई ? उनी अन्योलमा परे । तैपनि नजिकैको एक युवकलाई कोट्याउँदै उनले सोधे–‘यहाँ कोको लेखक कवि कहाँकहाँ छन् हँ ?’ युवकले नाक नेप्ट्याएर जवाफ दियो–‘पुराना कविलेखक अलिकति एकेडेमितिर साहित्यमा रिसरागबारे रिसर्च गर्दै छन् भन्ने सुनेथेँ, नयाँ लेखकहरू प्रायः यतै वरपर छरिएका होलान् । तपाईं कसलाई खाज्नुहुन्छ, एउटा बिलकुलै बफाउँदो नयाँ कवि त म पनि हुँ ।’ भानुभक्तले नमस्ते गर्दै खुसी प्रकट गरे–‘ओहो ! त्यसो भए त ढुङ्गो खोज्दा देउता मिलिहाल्यो नि । यहाँले कति वर्ष काव्यसाधना गर्नुभएको छ कुन्नि ?’ युवकले चारमिनारको –भारतमा बनेको सस्तो खाले चुरोट बट्टा उचाल्दै जवाफ दियो– ‘मैले लेख्न त यसपालिदेखि थालेको हुँ, तर गोडा सातेक लामालामा कविता लेखिसकेँ । एउटा ताजा कविता सुन्नुहुन्छ भने सुनाई पनि हाँलु ?’ आदिकवि भानुभक्त बविको कविता सुन्न तरखराउँदै थिए, अर्को ठिटो आएर भन्न थाल्यो,‘तँ पनि कविता लेख्ने ? कवितै सुन्नुहुन्छ भने सुन्नुहोस् बाजे, बिलकुलै आधुनिक यही पीपलको बोटको कविता ।’ ‘ओहो ! यहाँहरू सबै कवि हुनुहुँदो रहेछ । होइन, यहाँ अरू कवि पनि छन् ?’ ‘अरू को छन् र ? ’भनी नयाँ कवि बताउँदै थिए, पत्रिका बेच्ने हकरले उहीँनिर आएर भन्यो– ‘एउटा कवि त म पनि छु हजुर !’ उसले भन्दाभन्दै पसलेले कुरा थप्यो–‘यहाँ मिनिष्टरदेखि कम्पोजिटरसम्म सबै कवि ।’ जेहोस् आदिकविलाई कविहरू बढेको सुन्दा खुसी नै लाग्यो । यस्तै खुसी–खुसीमा एकजना सज्जनले कविजीलाई नजिकैको रेष्टुराँतिर डोर्याए । उनी रेष्टुराँभित्र पस्नमात्र के लागेका थिए उनको बिर्खे टोपीमा एउटा मरेको मुसो फ्वात्त पर्न आयो । उनी जिल्ल परेर मास्तिर हेर्दै थिए । अर्को झ्यालबाट एक थुप्रो फोहर–फाल्नको टाला पुष्पवर्षा भएझैं सडकमा बर्सिए । यो वर्षाले आफ्नो स्वागत गरेको हो कि विरोध गरेको हो, उनलाई ठम्याउन धौधौ पर्यो ।
रेष्टुराँभित्र एक छेउमा २–४ जना भात खाँदै थिए, अर्को छेउमा २–४ जना जना जेरी जिप्टयाउँदै थिए । अलि पर एउटा अँध्यारो कुनामा २–४ जना रम र ममः भन्दै थिए । त्यसैले यो भट्टी हो कि चियापसल हो कि भोजनशाला हो–कविले केही बुझ्दै बुझेनन् । उनको उत्सुकता शान्त गर्दै नजिकैका सज्जनले भने– ‘यस पसलका विशेषता के भने शाकाहारी, मांसाहारी, दुग्धाहारी र मद्याहारी जो जेजस्तो छ यहाँ खानेकुरा पाइन्छ । दोस्रो विशेषता यहाँ जति पुरानो खानेकुरा खोजे पनि तुरुन्त पाइन्छ । भानुभक्तले ठाने– ‘म पनि पुरानै मान्छे भएकोले यहाँ ल्याएको होला ।’ यस्तैमा सिँगानको लत्को दौरातिर पुछ्दै एउटा मरन्च्याँसे केटाले खानेकुराको रिकापी टक्रयायो । भानुभक्त भने कविताको धूनमा मस्त थिए :
होटलबाट निस्केपछि भानुभक्तलाई ठूलो समस्या पर्यो –वासको । रात परिहाल्यो, नयाँ कान्तिपुरीमा आफूले चिनेको कोही छैन । पहिले त उनीसँगैका सज्जनले आदरसाथ पसलमा लगेर चिया खुवाएकाले उनैले घर लैजालान् भनी ढुक्कामा थिए, तर चिया खाइसकेपछि पो सज्जनको उद्देश्य उनले बुझे । सज्जन रहेछन–लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका एजेन्ट । उनलाई इन्स्योरेन्स गर्नोस् भनेर निकै बुझाउँथे तर भरखर स्वर्गबाट ओर्लेका भानुभक्तलाई कहाँको लाइफ इन्स्योरेन्स । आखिर बल्लबल्ल सज्जनको पञ्जाबाट फुत्केर भानुभक्तजी वास माग्ने तरखरमा हिँडे । घरैघरले बाटो नपाइने आजको कान्तिपुरमा वासकै समस्या छ भन्ने उनलाई के थाहा थियो र । एकदुई गर्दै नयाँ सडकको ढोकादेखि वसन्तपुरसम्म गोडा पन्ध्रेक घरमा उनले वास मागे (एक रातका लागि । तर कसैले छैन मात्र भनेर फर्काए त कसैल ‘यत्तिका होटल हुँदाहुँदै वास माग्न घर घर चाहार्ने यो लबस्तरो बूढोलाई लगाइदेओ न कुक्कुर’ पनि झपारे । कसैले उनलाई चोरको शङ्का गरे त कुनै लाल बुझक्कडले ‘यो सी.आइ. डी हो सी. आइ. डी. पनि भने । बाह्र बजुन्जेल खोज्दा पनि वास पाउन नसकेर भानुभक्तजी रङमङिदै थिए, बेसमयमा हिँडेको उनलाई पुलिसले पक्रिदियो । ‘स्वर्गबाट कान्तिपुर हेरुँ भनेर आएको, वास नपाएको कुरा बताएपछि पुलिसले निगाहा गरेर भन्यो– ‘यो हावा खुस्केको पहाडीया रहेछ । भैगो छाडिदिऊँ ।’ अनि ‘पेटीतिर गएर बस’ भनी पुलिस हिँड्यो । भानुभक्तजी पेटी–पेटी रानीपोखरीको डिलमा पुगेर रोकिए । रानिपोखरीको पालेले कड्केर सोध्यो, ‘क्या हो, हाम्फाल्ने सुर छ कि कसो ?’ उनले नम्रतासाथ ‘होइन’ भने र यो पनि बताए कि ‘बाँकी रात काट्ने कुनै ओतसोत पाइन्छ कि ?’ बूढो पालेले भानुभक्तलाई पनि बूढो देखेर हो कि किन हो ‘ऊ त्यो सालिकता बस्नोस् बाजे !’ भनी भानुभक्तकै सालिक देखाइदियो । उनी गएर यसो हेर्छन् त आफ्नै प्रतिमूर्ति । एकछिन दङ्गदास भएर उनले आफ्नो सालिक टुलुटुलु हेरिरहे । माला लगाइदिएको सिन्दुर दलिदिएको भव्य मूर्ति, उनी एक मन दङ्ग परे । तर आफ्नो बिहानदेखिको रित्तो पेट छाम्दा र यत्रो कान्तिपुरीमा वास नपाउँदा भने उनलाई ग्लानि पनि लाग्यो । सालिकनिर टुसुक्क बसेर पछ्यौरा झिकेर आढ्दै उनले गमे–
उनी गुनगुनाउँदै थिए, त्यहीँनेर पेटीमा एक डल्लो भई सुतेको एउटा केटो उठेर भन्न लाग्यो– ‘दाजु ! तिम्रो पछ्यौराको एउटा छेउ मलाई पनि देऊ न, साहै्र जाडो भयो ।’ भानुभक्तले उसलाई बोलाएर जम्मै पछ्यौरा ओढाइदिए । जीउ तातेपछि केटाले भन्यो ‘भात खाने जग्गा मासेर त्यत्रा घर बन्छन् तर गरिबको छोरालाई सधैँ पेटीका बास । आज भानुजयन्ती, राति ९ बजेसम्म सारा मान्छे यहीँ जम्मा भएर बेलामा सुत्न पाइएन । यो ‘भानुझक्तको सालिक भन्छ, यो भानुभक्त भन्ने कुन चाहिँको रे’ छ हँ दाइ ? भानुभक्तलाई पनि देखेनौ हगि ?’
एकोहोरो फतफत गरिरहेको केटोले निकै बेर सही थापेको नसुन्दा मुण्टो उठाउँदै भन्यो– ‘साँच्ची भानुभक्तलाई देखेनौ हगि तिमीले ?’ तर केटाका प्रश्नको जवाफ दिन भानुभक्त त्यहाँ थिएनन, उनको अगाडि त जिल्ल परिरहेको थियो भानुभक्तको सालिक मात्र । परपर को भटयाउँदै जाँदै थियो–
साह्रै दङ्ग पर्या घुम्या वरिपरि मो भानुभक्तै भनी
आफ्नै सालिकमा कटाइ अलि बेर्ती अन्तरैध्यान् भया ।।’